တိုနီဂျ - ဝီကီပီးဒီးယား
(1976-02-05) ဖေဖော်ဝါရီ ၅၊ ၁၉၇၆ (အသက် ၄၆)
သရုပ်ဆောင်၊ ကိုယ်ခံပညာကျွမ်းကျင်သူ၊ အက်ရှင်အကွက်ထွင်သူ၊ စတန့်မင်းသား၊ ဒါရိုက်တာ
တိုနီဂျ ဟု နိုင်ငံတကာတွင် လူသိများသော သက်ချခွန် ရီရမ်း (ထိုင်း: ทัชชกร ยีรัมย์; RTGS: Thatchakon YeeramThatchakon Yeeram; ထိုင်းအခေါ် ဂျ ပီနွန် (ထိုင်း: จา พนม; RTGS: Cha PhanomCha Phanom) သည် ၁၉၇၆ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၅)ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားပြီး ထိုင်းရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ သိုင်းဆရာ၊ အက်ရှင်အကွက်ထွင်သူ၊ စတန့်မင်းသား၊ ဒါရိုက်တာ နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူ၏ နာမည်ကြော်ရုပ်ရှင်များမှာ Ong-Bak: Muay Thai Warrior (2003), Tom-Yum-Goong (also called Warrior King or The Protector) (2005), Ong Bak 2: The Beginning (2008), Furious7(2015) နှင့် Sha po lang2(also called SPL II: A Time for Consequences or Kill Zone 2) (2015) တို့ဖြစ်သည်။ မြန်မာပရိတ်များကြားတွင် ဝမ်းဘက်(အွန်းဘက်) မင်းသား ဟုကျော်ကြားသည်။
၂.၃ ၂၀၁၀ မှ ယနေ့ထိ
တိုနီဂျကို ထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းအရပ်မှာရှိ ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းသော အီစံဒေသတွင် မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့သည်။ သူသည် ခူ မျိုးနွယ်မှ ဆင်းသက်ပြီး ထိုင်း၊ မြောက်ပိုင်းခမာနှင့် ခူဘာသာစကားများပြောဆိုနိုင်သည်။ 
ငယ်စဉ်က ဘရုစ်လီ၊ ဂျက်ကီချန်းနှင့် ဂျက်လီတို့၏ ရုပ်ရှင်များကိုကြည့်ပြီး ကိုယ်ခံပညာကိုသင်ယူရန်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့သည်။
တိုနီသည် စတန့်မင်းသားအဖြစ် မွေထိုင်း စတန့်လောကတွင် ၁၄ နှစ်ကြာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ဒါရိုက်တာ Panna Rittikrai ၏ ရုပ်ရှင်များတွင် အများဆုံး ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထိုင်းရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ Insee Daeng (Red Eagle) စတန့်မင်းသားအဖြစ် လူစားထိုးသလုပ်
၂၀၀၆ ခုနှစ်ရှိ ဂျ
၂၀၁၀ မှ ယနေ့ထိ[ပြင်ဆင်ရန်]
တိုနီဂျ သည် သူ၏အချိန်ကြာတွဲခဲ့သော ချစ်သူ Piyarat Chotiwattananont နှင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်တွင် တရားဝင်လက်ထပ်ခဲ့ပြီး မင်္ဂလာပွဲကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလ ၃ ရက်တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ သူတို့ဇနီးမောင်နှံတွင် သမီးတစ်ယောက်နှင့် သားတစ်ယောက် ရှိသည်။ 
2003 Star Entertainment Awards Actor in Leading Role of the Year Ong-Bak ဆုရရှိ
2004 Suphannahong National Film Awards Best Actor ဆန်ကာတင်
2005 Honorary Award Tom-Yum-Goong ဆုရရှိ
2006 Online Film Critics Society Awards Best Breakthrough Performance Ong-Bak ဆန်ကာတင်
2008 Top Awards Motion Picture of the Year Ong Bak2ဆုရရှိ
2009 Nine Entertain Awards ဆုရရှိ
Chalermthai Awards ဆန်ကာတင်
Suphannahong National Film Awards Best Actor ဆန်ကာတင်
2010 Top Awards Actor in Leading Role of the Year Ong Bak3ဆန်ကာတင်
2011 Deauville Asian Film Festival Best Actor ဆန်ကာတင်
↑ ""จา พนม" เปลี่ยนชื่อเสริมดวง เผย "องค์บาก3" จะไม่ยุ่งเรื่องเงิน" (in Thai)၊ Manager Online၊ 24 February 2009။6February 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Tony Jaa။ About.com။ 2011-09-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Twitch Film,ONG BAK Star Tony Jaa Joins The Monkhood. Archived 25 June 2010 at the Wayback Machine. May 28, 2010.
↑ Cavagna၊ Carlo။ Profile & Interview: Tony Jaa။ AboutFilm။ 21 February 2005 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2011-09-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Searching for Tony Jaa: The Hottest Martial Arts Movie Star Since Jackie Chan and Jet Li (Part 1)"၊ Black Belt၊4November 2013။6November 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ တောရွာစပါးခင်းများထဲမှ ဟောလိဝုဒ်ကို တက်လာခဲ့သော တိုင်းရင်းသားတဦး။ ထက်ဝန (9 November 2018)။[လင့်ခ်သေ]
↑ Pornpitagpan, Nilubol (February 3, 2003). "Leap into the limelight" Archived 21 February 2003 at the Wayback Machine.. Bangkok Post.
↑ New Single ลุยเฮลุย (GROUNDBREAKING)။6November 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 November 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တိုနီဂျ&oldid=726343" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၅:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။